Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Emile Smith Rowe Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Emile Smith-Rowe na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, enyi nwanyi / nwunye ya ibu, ibi ndu, uru odi na ndu nke onwe.
Na nkenke, anyị nwere akụkọ ihe mere eme nke bọọlụ bọọlụ bekee nke sitere n'ike mmụọ nsọ Footballlọ egwuregwu bọọlụ Arsenal. Anyị na-amalite site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama na ndị Gunners.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị na-agụ gị, lee ụlọ ọrụ ọganiihu ndụ ya - nchịkọta zuru oke nke Emile Smith Rowe's Bio.
Akụkọ banyere Emile Smith Rowe. Site na nwata rue oge ama.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ dị Kevin De Bruyne na anya na ikike. N'ihi nke a, GOAL kpọrọ ya Croydon De Bruyne nke Arsenal - nwata nwoke nwere ike ichota oghere obula n’ime igbe igwe.
N'agbanyeghị nkwanye ugwu ahụ, anyị hụrụ na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara akụkọ ndụ ya. Anyị nwere ya, ihe niile akwadoro maka gị, na maka ịhụnanya maka egwuregwu ahụ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Emile Smith Rowe Storymụaka Akụkọ:
Maka ndị na - ebido Biography, ọ na - aza aha ahụ - Emzinho. Emile Smith Smith Rowe mụrụ na 28th nke July 2000 na nne ya, Fiona Rowe, na nna, Leslie Rowe, na Croydon, nnukwu obodo dị na ndịda London, England.
Ndị ọkachamara n’egwuregwu bọọlụ nke bekee bụ nwa nwoke nke abụọ n’ime ụmụ nwoke abụọ - amụrụ site na njikọ dị n’etiti nne na nna ya nwere ike bụrụ afọ iri anọ. N'okpuru ebe a bụ Les Smith Rowe na onye ọrụ ibe ya.
Zute otu nne na nna Emile Smith Rowe. Seen hụla myirịta dị n’etiti ya na Les, papa ya?
Na mkparịta ụka ya na Les, anyị chọpụtara na o sere foto a na mmemme ekeresimesi a na-eme kwa afọ ebe Emile na-agakwa.
N'oge ahụ, nwata ahụ bịanyere aka n'akwụkwọ ndebanye aha ma were ụfọdụ ndị pụrụ iche nna ya soro rụọ ọrụ foto. Nke a bụ ihe ịrịba ama nke mmalite ya dị umeala n'obi.
Enwere ọtụtụ ihe dị ukwuu banyere isoro nwanne nwoke okenye nọrọ oge nwata. Maka nwa okorobịa Emile, o mere ka ndụ ya dị ụtọ.
Siblingsmụnne abụọ ahụ nọrọ afọ nwata ha na Thornton Heath, obodo a ma ama na ndịda London. Dị ka nwatakịrị, ESR arụsị Frank Lampard.
Emile Smith Rowe Ezinụụlọ:
Ndị nne na nna bọọlụ - Naa na Fiona - bụ ndị na-akwụ ụgwọ n 'ụlọ akwụkwọ etiti. Ma papa ma papa m nwere ọ pleasureụ dịka ndị ọrụ na-elekọta mmadụ na mgbago ugwu London.
Na mbido, Naa na Fiona hụrụ na ha wuru ụlọ nke ibi ndụ ya gbadoro ụkwụ na ịrụsi ọrụ ike na nkwanye ùgwù. Ha kụnyere n'ime ụmụ ha.
Emile Smith Rowe Ezinụlọ:
Ebe amụrụ onye bekee na Thornton Heath na-ekwu ọtụtụ ihe gbasara ọchịchọ ya ime ka ndị egwuregwu bọọlụ nwee obi ụtọ. Eziokwu bụ, ndị sitere na Emile na mgbọrọgwụ London dị uchu. Na nchịkọta, ha maara ihe ọ ga-eme iji nwee ihe ịga nke ọma na ndụ.
Emile Smith Rowe ezinụlọ bụ ụmụ amaala Thornton Heath, ndịda Greater London, England.
Lee ndụ nke Wilfried Zaha, dị ka ọmụmaatụ. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ihe atụ zuru oke nke Thornton Heath mụrụ ma zụọ. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, obodo nke Emile anaghị emeputa ndị umengwụ.
Dịka nwatakịrị, Emzinho nwere ike ịkọ ọdịnihu ya. Ọchịchọ ya ịghọ ọkachamara n'ịgba ọsọ adịghị ka echiche efu.
N'ịghọta ọchịchọ nwa ha nwoke maka ịgba bọl maka ndụ, nne na nna Elme (Fiona na Les) debanyere aha ya n'ụlọ akwụkwọ egwuregwu bọọlụ dị na mpaghara.
Iji bulie nkà ya, Emile na-arụsi ọrụ ike gara n'ihu na football ọbụlagodi mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ. O sonyekwara aka na bọọlụ agbata obi gbara gburugburu. N'ihi na nne na nna Emile Smith Rowe rụrụ ọrụ na North London, ọ dịịrị ha mfe ịchọta ohere ọrụ maka nwa ha nwoke.
Tupu ya abanye na Arsenal, Emile nwere ikpe na Chelsea gburugburu 2009. N'ikpeazụ, na ọ theụ nke ezinụlọ ya, ndị Gunners nabatara nwata ahụ mgbe ọ dị afọ 10.
Emile Smith Rowe Football Akụkọ nke a:
Mgbe ịbanye n'ime ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Arsenal, nsogbu bịara maka ezinụlọ. Ọ na-esiri Les na Fiona ike njem ihe dị ka elekere abụọ kwa ụbọchị (na-agbada) iji kwụsị Emile na Hale End - ebe anyị nwere agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ Arsenal.
Iji mee ka ndụ dịkwuo mfe, Emile, nwanne ya nwoke na ndị mụrụ ya kpebiri ịkwaga South na North London. Site na nke a, ewepụla njem njem ogologo oge a na-emebu.
N'ịbụ onye kwagara ebe ọzọ, ọ dịịrị papa ya mfe ilegide nwa nke ụlọ ya anya. N'oge a, Les na Fiona malitere ile ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu ọ bụla nwa ha nwoke na-egwu.
Ndụ Ndụ Mmalite na Arsenal:
Emily nwetara ngwa ngwa na ndị Gunners. Ọ bụ ụdị ahụ biliri karịa nsogbu ọ bụla etinyere ya.
Ọ chọkwuru ike ka ọ na-agafere agụmakwụkwọ. N'ime ụmụntakịrị ndị a - laa azụ na 2010 - anyị nwere ike iti obi anyị ike ịsị na Emile hụkarịrị ihe ịga nke ọma
Na njem site na nwata, Smith Rowe hụrụ onwe ya ka ọ na-etolite ịbụ nwata. Ọ bụ nwa nwoke nke a gọziri agọzi site na njikwa na njigide na-ewe iwe. Na o ji ọ toụ jiri nwayọọ duhie ndị iro ya gara aga.
Emile Smith Rowe Biography - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Ka ọ na-eru nso ụbọchị ọmụmụ ya nke iri na ise, mkparịta ụka bịara n'etiti ndị na-eduga n'okpukpe talent bụ ndị tụlere ikike nwatakịrị ahụ nwere maka England.
O juru ndị ezinụlọ Emile Smith Rowe anya, nwa nke ụlọ ahụ kpọrọ oku England - maka ndị nọ n'okpuru-16.
Otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị - ka na-aga n'ihu n'ogo mmụta na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Arsenal - Emile nwetara ọkpụkpọ oku ọzọ. Oge a, a kpọrọ ya ka ọ bụrụ akụkụ nke 2017 FIFA U-17 World Cup.
Site na ntutu na-acha odo odo, Smith Rowe esighi ike ịhapụ uche na pitch. N'ihi ihe mgbaru ọsọ ya dị ebube, nwa anyị nwoke n'akụkụ Rhian Brewster nyeere England aka inweta iko ahụ.
Nchịkọta nke oge ejiri oge ọrụ ya yana nsọpụrụ mba ya hụrụ nnukwu klọb na-achụ ya maka mbinye aka.
N'ime ndị dike ahụ bụ Tottenham na Barcelona. Eziokwu ka a kwuru, Emily kwụrụ eziokwu na Arsenal, ọbụlagodi n'azụ ụlọ klọb. Obi umeala na ntụkwasị obi hụrụ ya ka o kwere nkwa ịkwado ndị Gunners mgbe ọ jụrụ Spurs na Barca.
Emile Smith Rowe Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Dị ka ọtụtụ ndị na-eto eto mere, ọ gara mbinye ego mgbe ọ dị afọ 18. Nke mbụ na RB Leipzig na nke abụọ na Huddersfield Town.
Mgbe ọ kwụsịrị ụgwọ ya, nwata ahụ laghachiri Arsenal - n'okpuru onye nlekọta Freddie Ljungberg. N'oge ahụ, Emile malitere ime akara ya ma jiri ndidi na-eche ohere nke ndị otu egwuregwu mbụ nke Arsenal.
Ka ọ na-erule oge etiti 2020/2021, arụmọrụ Arsenal dara. N'oge ahụ, kpakpando ọtụtụ nde klọb kụchiri. Na-echegbu onwe Mikel Arteta nọ na-achọ ihe ọ bụla ga-eme ka anyị nwetụ olileanya. Na-abanye n'ime ala ya, aha a na-amaghị ama nke Emile Rowe-Smith pụtara.
Achọpụtaghị ekele nke ndị Fans na-agba bọọlụ dịka onye na-agba ọsọ n'etiti 6ft-ogologo n'akụkụ ndị ama ama (dị ka Kieran Tierney) ghọrọ otu n'ime kpakpando ndị pụtara ìhè nke mere ka klọb ya nwee njedebe dị mma nke 2020 na mmalite dị mma nke 2021.
N'oge ahụ (Jenụwarị 2021), mgbe Emile Smith Rowe mere ka obi jọọ ọ againstụ megide Chelsea mgbe ọ gbasịrị N'Golo Kante, Ndị fans Arsenal dara ada - were otu ihe n'uche ha. Na ọ dịkwaghị mkpa ha Mikel Arteta ịbanye Isco dị ka onye nnọchi maka Ozil. Lee, ọhụụ ọhụrụ, AKA Emzinho.
N'oge a na-ede Bio a, nwa a mụrụ na Fiona na Les bụ otu n'ime atụmanya na-atọ ụtọ na Arsenal.
Mepụta ụgbọ mmiri na-emenye ụjọ Bukayo Saka (onye ọzọ na-eguzosi ike n'ihe nke Arsenal), anyị na-atụnye Smith Rowe aka ka ọ bụrụ Arsenal mgbe niile. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Emile Smith Rowe Lifehụnanya Ndụ - Nwanyị, Nwunye, Nwa?
Site na ịrị elu ya wee bụrụ onye ama ama wee nwee ọfụma na ndị Gunners, o doro anya na ndị egwu bọọlụ Arsenal ga-ajụ ajụjụ ụfọdụ gbasara ndụ ịhụnanya ya.
Ajuju dika Emzinho nwere enyi nwanyi. Ma ọ bụ ma eleghị anya,… nwunye na nwatakịrị dịka ọgbọ ya - Phil Foden - na-eme.
Ọ dị mma, lee echiche anyị. Lifebogger kwenyere na bọọlụ bọọlụ nwere nwanyị na ndụ ya mana ọ na-echere oge kwesịrị ekwesị iji kpughee ya. Ọ bụghị naanị ya, mana ụmụ amụrụ n'ọdịnihu maka Emile Smith Rowe tiri anyị ihe nna na ezigbo di.
Ọnye na-bụ Emile Smith Rowe away from Footballing Affairs? Iji mara ya nke ọma, anyị ga-agwa gị obere akụkọ.
Ọtụtụ afọ gara aga, otu onye nta akụkọ jụrụ nwata ahụ ebe a mụrụ ya. Iji mee ka onye na-agba ajụjụ ọnụ ndụ kwụrụ ọtọ dịka o nwere ike ịnwale, Emile zara ya n'okwu… “Croydon.”
Nwa nwoke nke Arsenal ahụ abanyeghị na nkọwa site na ịkọ Thornton Heath - ebe amụrụ ya, ebe ọ kpọrọ ụlọ.
Ugbu a gịnị ka nke a pụtara?… Ọ pụtara Smith Rowe emeriwo ọtụtụ agha anyị na-amaghị ihe ọ bụla gbasara ya - belụsọ mgbe o kwuru okwu banyere mgbọrọgwụ ezinụlọ ya.
Ọ bụ onye na-eme ka uru ike echiche na ụkpụrụ omume dịrị. Anyị na-ahụ ịdọ aka ná ntị dịka onyinye na-eme ka onye na-eto eto Gunner na-aga.
Banyere ihe omume ya, kpakpando na-enwu dị ka Hector Bellerin bụ onye na-egwu egwuregwu oge. N'ikpeazụ, anyị hụrụ na ọ hụrụ ịzụ ahịa naanị ya - na-enweghị enyi nwanyị - ọbụlagodi ugbu a.
Emile Smith Rowe Web:
Kedu ihe Emzinho ji pound 20,000 ọ na-enweta kwa izu? Ihe mbụ, ọ na-emefu uwe na akpụkpọ ụkwụ nke ọma. ESR nwere mmasị ime ka ọdịdị ya gosipụta otu n'ime agwa ndị na-amaghị ya.
N'ikwu okwu banyere omume ya, Emile nwere ihu ọchị nke bụ ihe nnọchianya nke ndụ ịdị umeala n'obi ya. Nwa amaala Croydon maara nke ọma otu esi akwa ndị mmadụ ọchị na-enweghị mkparị na omume ahụ.
Ugbu a etinye ya na ihe ruru K 700K (ọnụ ọgụgụ 2020), ọnụ ahịa net Emile Smith Rowe nwere ike ịgbago elu dị ka azụmahịa mega Arsenal na-ahụ.
Iji chịkọta ọnọdụ ego ya, lee ụgbọ ala ọ na-anya. Ọ na-ekwu ọtụtụ ihe banyere ike ịzụta ya ugbu a.
Legbọ Emile Smith Rowe.
Ndụ ezinụlọ Emile Smith Rowe:
Ha dị ka alaka osisi. Ọ bụ ụlọ nke toro n'ụzọ dị iche iche, mana mgbọrọgwụ ha họọrọ ịnọgide dị ka otu. N’akụkụ a, anyị ga-amụtakwu ihe banyere nne ya, nna ya, nwanne ya, na ndị ikwu ya.
Banyere Emile Smith Rowe Ndị nne na nna:
Lee anya n'anya Les. Kedu ihe ị hụrụ?… Maka anyị, anyị hụrụ ịhụnanya dị ọcha sitere n'aka Nna mpako. Site n'ike mmụọ nsọ ya (omume nke elekọta mmadụ), nne na nna emeela ihe omume ụlọ akwụkwọ ha.
Super papa, Les bụ isi iyi nke njide onwe onye mgbe nwunye ya Fiona bụ mgbọrọgwụ nke obiọma na ịdị umeala n'obi n'ime ezinụlọ. N'ịbụ ndị bi na North London, nne na nna na-arụ ọrụ ugbu a na ngalaba agụmakwụkwọ obodo. Ha ka na-ewepụta oge iji gaa egwuregwu ọ bụla nwa ha nwoke na-egwu.
Banyere Emile Smith Rowe Nwanne:
Ruo ka anyị si mara - kemgbe ha bụ nwata, onye egwuregwu bọọlụ yana nwanne ya nwoke nke okenye raparakọtara ọnụ dịka gluu. Otú ọ dị, ka ọtụtụ afọ na-agafe, ha abụọ chere ọdịnihu ha ihu.
Anyị amachaghị ma nnukwu nwanne Emile banyere bọọlụ. Ọ bụ naanị oge tupu ndị nyocha anyị achọpụta banyere ya na ndị ikwu ya - otu onye ọ ketara ụkwụ ya isii.
Emile Smith Rowe Eziokwu Eziokwu:
N'ịkọtara akụkọ nwata anyị na Biography, anyị ga-eji ngalaba ikpeazụ a gwa gị eziokwu ị nwere ike ịmaghị banyere ya Emzinho.
Eziokwu # 1 - N'ịtụle ụgwọ ọnwa ya na Nkezi Citizen:
Kwa Afọ € 1,134,600 £ 1,041,600
kwa ọnwa € 94,500 £ 86,800
Kwa Izu € 21,787 £ 20,000
Kwa .bọchị € 3,112 £ 2,857
Kwa elekere € 129 £ 119
Kwa Nkeji € 2.2 £ 2
Kwa nke abụọ € 0.04 £ 0.03
Kemgbe ị malitere ile Emile Smith Rowe'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ị maara?…. Onye ọ bụla nọ na London na-enweta £ 38k kwa afọ kwesịrị ịrụ ọrụ maka afọ 27 na ọnwa isii iji mee ka Emile Smith Rowe na-akwụ ụgwọ kwa afọ (2020 stats).
Eziokwu nke 2: Ọ dara n'ụra otu mgbe - na-efu egwuregwu bọọlụ:
O mere n'oge ya n'okpuru 23 ụbọchị - oge Freddie Ljungberg zụọ ya. Faithfulbọchị ahụ kwesịrị ntụkwasị obi, ndị fan chere maka Mesut Ozil nke ndị ntorobịa Arsenal ịbịa zọpụta ha na mmeri.
O di nwute, Emile nke anyi huru oge obi uto ya. O mere mmehie - n'ọnọdụ ya kachasị mma, na ebe a na-amaghị ama - na-efu egwuregwu ahụ na usoro ahụ. N'ihi nke a, ndị enyi ya gụrụ ya aha nwa oge - 'Ihi ụra bro.'
Eziokwu nke 3: Bụrụ onye ọkpụkpọ Tennis na Arsenal:
Nke a mere mgbe ọ ka nọ n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nke Gunner. Emile nwere nnukwu egwuregwu Tenis na arụsị otu oge Arsenal, Robin van Persie .
Dabere na akụkọ, Smith Rowe nwetara aha ọma maka ịbụ onye kachasị egwu egwuregwu tennis n'oge ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Arsenal.
Eziokwu nke 4: Mmekọrịta nke Kevin De Bruyne:
Hụ Emile Smith Rowe na-echetara ndị na-agba bọọlụ bọọlụ nke KDB, ọ bụ eziokwu? Site n'iyi, ị nwere ike ịmegharị ha dị ka ụmụnne.
Ọzọkwa, ọ gaghị abụ ihe mgbagwoju anya na ajụjụ dị iche iche gbasara kpakpando Man City ga-amalite. Ajụjụ dịka ọ bụrụ na Rowe bụ Albino - ka ndị mmadụ na-ajụ maka ya Kevin De Bruyne.
Eziokwu nke 6: FIFA stats:
Egwuregwu vidio ịme anwansị nke ọma mere site na ịkọ ọdịnihu dị egwu maka nwata. Agbanyeghị, maka ọkwa ya niile, Emile na-arịa ọrịa na-adịghị mma - ọ bụ ezie na ọ kachasị njọ dị ka Liverpool Rhys Williams kwuru. Anyị ji n'aka na ụmụ nwanyị abụọ ahụ ga-ahụ ịrị elu.
Eziokwu nke 7: Ihe mere o ji eyi obere sọks:
N'oge ọ na-ewu ewu, ị nwere ike ịhụ ya na pitch n'ihi ụkwụ ya. Bọchị ndị a, anyị maara Emile ka anyị soro akụkụ nke Jack Grealish - dịka ha abụọ na-eyi ndị nche mkpụmkpụ na sọks. Nsonaazụ sitere na nyocha na-egosi na ọ bụ emume bọọlụ nke ya.
Obi abụọ adịghị ya, ndị na-akwado Arsenal nwere ike ịnwe nke ha Kevin De Bruyne na klọb ha mgbe nnukwu 2020 gbasoro ama.
N'ikwu nke a, Emile Smith Rowe's Biography na-akụziri anyị na anyị agaghị enwe ike itolite ọrụ ma ọ bụrụ na anyị ejighị ohere ahụ. Dị ka a hụrụ, ESR weghaara oge amara n'oge njedebe nke 2020.
Ọ dị ndụ LifeBogger obi ekele maka nne na nna ya maka àjà ha, ọkachasị mgbe ha ghọtara ọchịchọ nwa ha ịgba bọl maka ndụ.
Anyị maara ya na n'oge Emile Smith Rowe bụ nwata, Les na Fiona hapụrụ ụlọ ezinụlọ ha na Thornton Heath iji biri na North London. Ha mere nke a, ha niile n'aha iji hụ maka ọmalịcha nwa ha nwoke na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Arsenal.
N’amaghi ama, nwa okorobịa Gunner, ewezuga ya na Kevin De Bruyne dịkwa mma n’ịmepụta ohere na ị nweta goolu. Ọnọdụ dị ka onye na-awakpo etiti ma ọ bụ onye na-etiti etiti, anyị nwere ike ịsị na ọ nwere ngwakọta nke Brune na Dennis Beckamp.
N’afọ 2021, Fans nwere obi ụtọ ịhụ Emile Smith Rowe na-aga n'ihu na-enwu dị ka njem Arsenal gbaputa oyiyi ha furu efu.
Jiri obi ọma soro anyị ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị mma n'isiokwu a. Ma ọ bụghị ya, gwa na ngalaba nkọwa banyere echiche gị banyere onye na-eti ọkpọ. Maka nchịkọta nke Emile Smith Rowe's Biography, jiri tebụl Wiki a.
Aha n'uju: Emile Smith Rowe.
aha otutu: Emzinho.
Ụbọchị ọmụmụ: 28 July 2000.
Ebe amụrụ onye: Croydon, London, England.
Age 21 afọ na ọnwa 0.
Ndị nne na nna: Fiona Smith Rowe (nne) na nna, Les Smith Rowe (Nna).
Ụmụnne: Nwanne nwoke nwoke okenye na nwanyi.
Ezinụlọ Ezinụlọ: Thornton Heath.
Ogo na igwe elekere 1.82 Mita.
Ogologo na ụkwụ 6 etkwụ.
Bọọlụ Idol: Frank Lampard.
Ọnọdụ egwuregwu: Wakpo etiti.
18 ụbọchị gara aga
A mụọ kpakpando! EMS. Chukwu Gozie Ya